It is me. Ko Niknayman.: အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၏ (၉၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၏ (၉၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ။
Posted by Ko Niknayman at 9:58 AM
နအဖရဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲတဲ့လား။ လုံးဝအရှင်းဆန့် ...
မန္တလေးမီးလောင်မှု မနေ့ ကနှင့် ယနေ့ဓါတ်ပုံများ (၁...
နအဖရဲ့ဒီနေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကတော့ ဒီလို...
အမှန်တကယ် ကံဆိုးသူ ဒုက္ခသည်များ။
ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ပတ်သက်သော သဘောထားကြေညာချက်...
တော်လှန်ရေး အသိ၊ နိုင်ငံရေးသတိနဲ့ရှေ့ ဆက်ချီတက်ြ...
ဓမ္မအတွင်း အဓမ္မတို့ ဗြောင်ကျကျ ၀င်ရောက်လာနေပြီ။
စွမ်းအားရှင်တွေ ရဟန်းသံဃာတို့ ကို ရိုက်နှက်ရမ်းကား...
သူငယ်တန်းဖတ်စာသစ်လေး ဖတ်ရအောင်၊ သင်ရအောင်။
ညီမဖြစ်သူကလည်း ပါဝါပြ၊ အကိုဖြစ်သူကလည်း အာဏာပြ။
သံဃာသတ်တဲ့ နအဖကို စီးပွားရေးသပိတ် ၀ိုင်းမှောက်ကြစိ...
ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့် ကွက်ကြပါစို့ ။
တပ်မတော်သားတစ်ဦးမှ ပြည်သူသို့ အသိပေးချက်။
လုပ်ကြံခံရခြင်းကြောင့် ကွယ်လွန်သွားသော ကရင်အမျိုးသ...
ဗိုလ်ချူပ်မွေးနေ့ အတွက် ဘုရားစေတီပုထိုးများတွင် ဆ...
ပြည်သူ့ အင်အားကို ပြကြစို့ ။
ပြည်တွင်းတွင် နေရာအနှံ့ ဖြန့် ချီနေသော အာဏာရှင်အား...
(၆၁) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ နှင့် လှုပ်ရှားမှုဓ...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၏ (၉၃)...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ပြည်ထောင်စုနေ့ပန်ကြား...
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး၏ ပြည်သူလူထုအား အထူး...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ကြေညာချက် (၁/၂၀၀၈ (၈၈)။...
ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့(ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃) အမှတ်တ...
နမိတ်တဘောင် အဆိုးဆောင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်။
ကြံ ဖွံ့အသင်း ၀င် တစ်ဦး၏ အမြင်မှန်နှင့် ကြေညာ...
သူတောင်းစားတွေ သတိထားကြ။ အမှိုက်ကောက်တဲ့သူတွေ သတိထ...
တေဇရဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို လိုက်နေပြီ။ အခြားနိုင်ငံတေ...
အနုပညာဝါသနာပါသူ ပြည်တွင်းဘလော့ဂါတစ်ဦး (သို့ ) နေဘ...
ရန်ကုန်တိုင်းလူထုလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ၏ ကြေညာချက်။
အနှိပ်ခန်းများဖြင့် စီးပွားရှာနေသူတွေက ဘယ်သူတွေလည်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ( ၉၃) နှစ်မြောက်..မွေးနေ့ မဂ...
ယနေ့ တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့ သည် နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေသ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ကြေညာချက်အမှတ် ( ၄...
ကျွန်တော့်သား ကြံ့ ခိုင် ခွေးဖြစ်သွားလို့ရင်ကျု...